यौन शक्ति बढाउने खानेकुरा सोमवार, जेठ ६, २०७६
बिवाहपछि यस्ता १० परिवर्तन आउँछन् महिलाको शरीरमा सोमवार, जेठ ६, २०७६
कस्तो हुन्छ पहिलो पटकको यौन सम्पर्क ? मगलवार, बैशाख ३१, २०७६
यी औषधिको सेवनले यौन चाहना घट्छ यौन चाहना नआउनुका कारणहरू धेरै हुन सक्छन् जसमध्ये प्रमुख कारण रागरसको गडबडीलाई मानिन्छ । त्यस्तै व्यक्तिले उच्च रक्तचाप, मनोद्दिपक (मानसिक रोगको) औषधि र मधुमेहको औषधिको सेवन गरेको अवस्थामा पनि उसमा सो इच्छा नआउन सक्छ । सोमवार, बैशाख ३०, २०७६
विवाहपछि यौन चाहना नभएमा के गर्ने ? यौन चाहना नहुने विभिन्न कारण हुन्छन् । जसमध्ये सबैभन्दा प्रमुख कारण रागरसको गडबडी हो । त्यस्तै व्यक्तिले उच्च रक्तचाप, मनोद्दिपक (मानसिक रोग) को औषधि र मधुमेहको औषधि सेवन गरेको अवस्थामा पनि उसमा यौन चाहना नआउन सक्छ । सोमवार, बैशाख ३०, २०७६
रक्सी खाएर यौन सम्पर्क गर्दा के हुन्छ ? रक्सी खाएर यौन सम्पर्क गर्दा बढी आनन्द आउछ भन्ने एक किसिमको भ्रम छ हाम्रो समाजमा । तर यो भ्रम मात्र हो । सोमवार, बैशाख ३०, २०७६
उच्च रक्तचाप भएकाहरुले यौनसम्पर्क गर्दा के हुन्छ ? उच्च रक्तचाप भएका व्यक्तिकालागि यौन सम्पर्क घातक हुन सक्ने अध्ययनले देखाएको छ । सोमवार, बैशाख ३०, २०७६
चिकित्सक पनि दुर्व्यसनमा नेपालगन्ज मेडिकल कलेज शिक्षण अस्पताल कोहलपुर र नेपालगन्ज मेडिकल कलेज शिक्षण अस्पताल नेपालगन्ज लागुऔषधको अखडा बनेका छन् । त्यहि कार्यरत कर्मचारी र एमविविएस अध्यनरत विद्यार्थीनै लागुऔषध ओसारपसार गर्ने, सेवन गर्ने र अरुलाई पनि गराउने गरेको पाइएको छ । सोमवार, बैशाख ३०, २०७६
उपमहानगरपालिकामा पहिलो औषधी उद्योग नेपालगन्ज उपमहानगरपालिका भित्र पहिलोपटक औषधी उत्पादन केन्द्र सञ्चालनमा आउने भएकोछ । उपमहानगरपालिका वडा नम्बर १४ भवनीयापुर स्थित तीन विघा जमिनमा उक्त औषधी उत्पादन केन्द्र सञ्चालनमा आउनेभएको हो । आइतवार, बैशाख २९, २०७६
कस्ले गर्ने मेडिकललाई कारवाही ? नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाले नगरको फोहोर व्यवस्थापनमा उदासिनता देखाएकोछ । नगरमा फोहोर गर्ने जोसुकैलाई कारबाही गरि फोहोर व्यवस्थापनमा सक्रिए हुने उद्घोष गरेको उपमहानगरपालिका यसप्रति उदासिन बनेकोहो । शुक्रवार, बैशाख २७, २०७६
गर्मी छल्न सातुको बिक्री बढ्यो दिनहुँ बढिरहेको गर्मीबाट बच्न नेपालगन्जबासी विभिन्न उपाय अपनाउने गरेका छन् । कोही घरेलु उपायमा चिसो सरवत पानीबाट आफ्नो प्यास मेटाउदै गर्मी छलिरहेका छन्, भने कोही विभिन्न प्रकारका चिसो पेय पदार्थ पिएर गर्मी भगाइरहेका छन् । शुक्रवार, बैशाख २७, २०७६
बाटैमा गुज्रन्छ औषधिको म्याद जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय, जाजरकोटले महामारी हुन सक्ने ठाउँमा पठाएको औषधि बाटोमै म्याद गएको खुलासा भएको छ । जिल्लामा महामारी हुनसक्ने सम्भावित ठाउँमा तयारी अवस्थामा राखी पठाउने भन्दै राखिएको औषधि बाटोमै म्याद गुज्रेपछि समस्या भएको हो । बिहिवार, बैशाख २६, २०७६
क्यान्सर पीडित बिन्दुलाई सहयोग क्यान्सर रोगबाट पीडित महिला विकास निरीक्षक बिन्दु कुवँरलाई उपचार सहयोगार्थ ५ लाख ५४ हजार ४ सय ३६ रकम सहयोग हस्तान्तरण गरिएको छ । बिन्दु कुँवर उपचार सहयोगार्थ समितिले संकलन गरेको सो रकमको चेक आईतबार एक कार्यक्रमको आयोजना गरि सहयोग हस्तान्तरण गरिएको हो । आइतवार, बैशाख २२, २०७६
स्वास्थ्यकर्मी नै कर छलीमा सक्रिय नीजि मेडिकलमा काम गर्ने सत्प्रतिशत चिकित्सकले सेवाग्राहीबाट सेवा शुल्क लिदै आएका छन् । तर, उनीहरूले उक्त शुल्कको बिल भने दिदैनन् । शनिवार, बैशाख २१, २०७६
उफ ! नेपालगन्जको गर्मी देशकै सवैभन्दा बढि गर्मी हुने बाँकेको नेपालगन्ज तातिदै गएकोछ । विहानबेलुकाको समय केही शितल भएता पनि चर्को घामसगैं चल्ने तातो हावाका कारण नेपालगन्जको जनजिवन कष्टकर बनेकोछ । बिहिवार, बैशाख १९, २०७६
गर्मी बढेसगैँ भाइरल ज्वरोका बिरामी बढे मौसममा आएको बदलिका कारण बाँके लगायत पश्चिम तराईमा भाईरल ज्वरोका बिरामीहरुको संख्या बढेकाछन् । मौसममा आएको परिवर्तनसँगै बाँके जिल्लामा भाइरल ज्वरोका बिरामी बढ्न थालेको उनीहरुले बताएका छन् । बिहिवार, बैशाख १९, २०७६